उदयपुरकी कुमारी न्याय खोज्दै मोरङमा | Enepal Patra Pvt. Ltd.
उदयपुरकी कुमारी न्याय खोज्दै मोरङमा
उर्लाबारी, १८ कात्तिक । सँगै बाँच्ने र सँगै मर्ने कसम खाएर १७ वर्षको कलिलो उमेरमा प्रेम बिबाहपछि घरजम सुरु गर्नु भएकी ३१ वर्षीया कुमारी खत्री यतिबेला आफ्नै श्रीमानबाट असुरक्षित हुनु भएको छ ।
श्रीमान्ले कुट्ने, पिट्ने र मार्ने सम्मको धम्की दिएपछि उदयपुरको त्रियुगा ८ रातेखोला घर भएकी कुमारी अहिले मोरङको रतुवामाई ८ इटहरामा आफ्नी दिदीको घरमा शरण लिएर बसिरहनु भएको छ । श्रीमान् मात्र होइन,सासु–ससुरा, नन्द–आमाजु र देवर समेत आफ्नो पक्षमा नभएपछि उहाँ ज्यान जोगाउन गत कात्तिक ११ गते इटहरा आइपुग्नु भएको हो । कुमारीका १२ र ८ वर्षका दुई छोराहरू छन् ।
कुमारी आफ्ना पति सिद्धिकुमार खड्कासँग ५ वर्ष अघि देखि अलग्गै बस्दै आउनु भएको थियो । श्रीमान्ले बर्सेनि श्रीमती फेरेको थाहा पाएपछि कुमारी घरसल्लाह मै एक्लै बस्न थाल्नु भएको हो । बैदेशिक रोजगारका लागि कतार जाउन्जेल खड्का दम्पत्तिको घरजम गज्जब चलेको थियो । तर, खड्का कतारबाट फर्केर मलेशिया गएपछि कुमारीका दुखका दिन सुरु भए । कुमारी भन्नुहुन्छ–मलेसिया मै राई थरकी केटीसँग प्रेम बसेछ । त्यसपछि म र छोराहरू प्रति वेवास्था गर्न थाल्नुभयो । परिवारका सदस्यले समेत छोरो मान्छेले जति वटी ल्याए पनि तलाई राम्रो ग¥यो भने भै गयो नि , भनेर सल्लाह दिए । मैले पनि आफू भन्दा ठूलाको कुरा होला भनेर माने ।
राई थरकी ति महिलाले पनि विष खाएर आत्महत्या गरिन । उनको काज किरिया पूर्वीय परम्परा अनुसार मेरै घरमा भयो । कुचोले बढार्नु पर्ने कसिंगर हावाले उडायो भनेर म पनि खुसी थिए– कुमारीले भन्नुभयो । तर, श्रीमानले मगर थरकी अर्की आइमाई राखेको रहेछ । दुई जना महिला बीच खटपट भएपछि राई थरकी महिलालाई विष खुवाएर मारेको भन्ने हल्ला सुनें । कुमारीले भन्नुभयो– श्रीमान्लाई केही दिन प्रहरीले पक्राउ गरेर छोडेको गाउँमै हल्ला भयो ।
महिला भएकोले सहनु सबै सहेकै थिएँ । तर, सासु–ससुरा,देवर र नन्द– आमाजुले दशैंको टीकाको दिन श्रीमान्लाई तेस्री श्रीमती सहित घर भित्त्राउने स्वीकृति दिएपछि कुमारीले संसार सबै अध्यारो देख्नुभयो । आफ्नै भनाउँदाले दुईभाइ छोरा र आफूलाई घर निकाल्ने तानावाना बुनेको बुझेपछि उहाँले प्रहरी र स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गर्नुभयो ।प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले समेत सबैले मिलेर बस्नु भनेपछि कुमारी माथि लगातार आक्रमण हुन थाल्यो । न्याय मरेपछि हरेक दिन कुटाई खानु पर्ने, सासुले नै अर्को लोग्ने खोजेर जा भन्दै गाली गर्न थाल्नुभयो । श्रीमान कुट्ने,सासु कुटुने ,आफन्त जति सबै बिरानो भएपछि कुमारीले कात्तिक ११ गते घर छोड्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–उदयपुरमा मेरो कुरा कसैले सुनेनन् । न पुलिसमा उजुरी लिइदिए । न समाजले मेरो पक्षमा बोलिदियो । महिला अधिकारकर्मीले पनि मिलेर बस्न सुझाए । त्यसैले न्याय खोज्दै दिदीको घरमा आएकी हुँ ।
यतिबेला कुमारीको आँखामा आँशु सकिएको छ । निद्रा हराएको छ । आकासको जुन झार्ने सपना देखाएर बिहे गरेको केटालेनै मार्ने , काट्ने र कुट्ने गरेपछि ज्यान जोगाएर उहाँ मोरङ आउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो– के अब मैले न्याय पाउँदिन त ?
प्रकशित मिति : 2021-11-04